Madaxweyne Biden;"Dadka Afghanistaan waa inay ka tashadaan mustaqbalkooda" - Jowhar somali news leader
Madaxweyne Biden;”Dadka Afghanistaan waa inay ka tashadaan mustaqbalkooda”
By Mahad	 Last updated Jul 8, 2021
Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden ayaa si adag u difaacay go’aankiisa ah inuu ciidamada militariga Mareykanka ka saaro dalka Afghanistan, isagoo sheegay in dadka reer Afghanistan ay tahay inay ka tashadaan mustaqbalkooda.
Isaga oo ka hadlaya Aqalka Cad ayaa waxa uu Biden sheegay in milatariga Afghanistan ay awood u leeyihiin in ay iska celiyaan Taalibaan, oo horumarkooda ugu weyn toddobaadyadii la soo dhaafay ay kor u qaadeen cabsida laga qabo in dalku uu ku sii fido dagaal sokeeye.
Biden wuxuu sheegay in 31ka bisha soo socota ee August in guud ahaan ciidamada Maraykanka ka bixi doonaan dalka Afghanistan marka laga reebo 650 askari oo sugi doona ammaanka safaaradda Mareykanka ee Kabul .
Madaxweynaha Maraykanka Biden wuxuu sheegay in Mareykanku muddo dheer ka hor uu ku guuleystay ujeedkiisii ​​asalka ahaa ee gelitaanka Afghanistan sanadkii 2001, taasi oo ahayd in xididdada loo siibo xagjiriinta al-Qaacida iyo in laga hortago weerar kale oo mid la mid ah kii Sept.11, 2001 in lagu soo qaado dalka Maraykanka.
“Waan gaarnay ujeedooyinkaas, waana sababta aan u aadnay. Uma aadin Afghanistan inaan dhisno qaran. Waana mid xaq iyo mas’uuliyad u leh dadka reer Afghanistan kaligood inay go’aan ka gaaraan mustaqbalkooda iyo sida ay doonayaan inay dalkooda u maamulaan,” ayuu yiri.
Biden wuxuu ugu baaqay wadamada gobolka inay gacan ka geystaan ​​sidii loo heli lahaa heshiis siyaasadeed oo aan loo kala harin oo u dhexeeya dhinacyada is haya.
Waxana uu ku taliyay in dowladda Afghanistan ay tahay inay heshiis la gaarto Taliban si ay nabad ku wada noolaadaan.
“Sida kaliya ee nabad iyo amni looga heli karo Afghanistan waa hadii ay ka shaqeeyaan in heshiis wax ku ool ah lala yeesho Taliban … Suurtagalnimada in ay jirto hal dowlad oo mideysan oo Afghanistan ka taliya oo wadanka oo dhan ka taliya ayaa aad u wanaagsan.”
Biden wuxuu sheegay in Mareykanku qorsheynayo inuu kumanaan turjubaanada reer Afgaanistaan ​​ah ka raro dalka, dhamaadka howlgalka militariga Mareykanka ee dalka.
Waxaa loo wareejin doonaa wadan seddexaad iyagoo dalban kara fiisooyinka Mareykanka ee ay ku galaan Mareykanka,waxaa sidoo kale dhici karta in la geeyo dalal ay kamid yihiin Qatar iyo Isutagga Imaaraatka Carabta.
Dagaalyahanada Daalibaan ayaa la wareegay khamiistii degmo ku taal galbeedka Afghanistan oo ay ku jirto xuduuda weyn ee ay la wadaagaan Iran. Toddobaadkii ugu dambeeyay, Daalibaan waxay qabsadeen deegaanno xuduud la leh shan dal – Iran, Tajikistan, Turkmenistan, China iyo Pakistan.
Cannes movies and judges take angry swipe at ‘world run by gangsters’